Storage Devices के हो? – आइटी खबर डट नेट
by itkhabar March 16, 2021 November 23, 2021
धेरैलाई थाहा होला या नहोला डाटा भण्डारण उपकरण के हो र कति प्रकारका हुन्छन्।
तिनीहरू वैकल्पिक रूपमा Digital Storage, Digital Media, Storage उपकरणको रूपमा पनि परिचित छन्। यी केहि यस्ता हार्डवेयर उपकरणहरू हुन् जसले डाटा वा डाटा डिजिटल रूपमा भण्डार गर्दछन् र त्यो पनि अस्थायी वा स्थायी रूपमा। तिनीहरूको मुख्य उद्देश्य डाटा भण्डारण गर्नु नै हो।
कम्प्युटरहरूको बारेमा कुरा गर्दा डाटा भण्डारण त्यस्ता ठाउँ हो जसले डाटालाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र अप्टिकल फर्ममा भण्डार गर्दछ ताकि यी डाटाहरु आवश्यक परेको खण्डमा कम्प्युटर प्रोसेसरले सजीलै प्रयोगमा ल्याउन सक्दछ तपाईले यी भण्डारण उपकरणहरू कम्प्युटर वा सर्भर भित्र वा बाहिर फेला पार्न सक्नुहुनेछ।कम्प्युटर उपकरणको लागि Storage Devices एक महत्त्वपूर्ण अंश हो। Storage Devices फरक आकार, प्रकार र कार्यछ्यमता हरुमा उपलब्ध छन्, तिनीहरूको कार्य छ्यमता भने आवस्यकता अनुसार निर्भर पर्दछ। Storage Devices ले Digitally अस्थायी वा स्थायी रूपमा आवश्यकता अनुसार थाथ्यंक र जानकारी भण्डारण गर्ने गर्दछन।
भण्डारण उपकरण एक कम्प्युटर हार्डवेयर हो जुन डाटा सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न, र यसलाई आवश्यक अनुसार प्रयोग गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। Storage Device ले आफ्नो प्रकार अनुसार सिमित तथा असिमित समय सम्म Data अर्थात सूचना तथा तथ्यांक हरु भण्डारण Storeगर्न सक्दछ।
Storage Device को प्रकारहरु
Computer हरुमा जम्मा चार प्रकारका Storage Device हरु प्रयोग भएका हुन्छ।
Primary Storage Device प्राथमिक भण्डारण उपकरण
Secondary Storage Device माध्यमिक भण्डारण उपकरण
Tertiary Storage Device तृतीयक भण्डारण उपकरण
Off-line Storage Device अफ-लाइन भण्डारण उपकर NVNVN
बिशेस Primary Storage Devices लाइ भने Main Memory पनि भनिन्छ।
सेन्ट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) को माध्यम तथा मेमोरी बसको माध्यमबाट प्रयोग तथा चलायमान हुन्छ।
यो Storage Devices अस्थिर हुन्छ।
तिनीहरूको मेमोरी अस्थायी हुन्छ, जुन उपकरणलाई बन्द गरीन्छ वा पुनःबुट गरिन्छ, तब तिनीहरूको मेमोरी मेटिन्छ।
1. RAM > Random Access Memory , 2. ROM > Read Only Memory
Secondary Storage Devices CPU अर्थात् Central Processing Unit दुवारा सिधै सम्पर्कमा हुदैन यसमा input तथा Out-Put
channel प्रयोग गरिएको हुन्छ। जुन channel ले कम्पुटर र Secondary Storage Devices लाई जोड्ने काम गर्दछ। यो Non-Volatile अर्थात् अस्थिर हुने हुनाले Primary Storage Devices को भन्दा एसको Storage Capacity बढी हुन्छ। यो permanent अर्थात् स्थायी हुन्छ।
HDD > Hard Disk Drives
यो एक व्यापक कम्प्युटर भण्डारण प्रणाली हुनाले साथै येस्को चालपनि ढिलो हुनाले केवल तथ्यांक अभिलेख गर्नमा मात्र प्रयोग गरिन्छ,
जुन बार बार Access हुँदै। र यो Devices त्यति महत्वपूर्ण पनि छैन, यो Personal Computer को कुनै भाग पनि होइ।
1.Magnetic Tape, 2.Optical Disc
4. Off-line Storage Devices
यो storage device लाइ साधारण तय पेन ड्राइभ, मेमोरी कार्ड ,फ्लपी डिस्क भनिएपनि एस्लाई जोड्न र हटाउन मिल्ने हुनाले अंग्रेजी भाषामा Removal Storage device पनि भनिन्छ।
1.pen drive 2. memory card 3. floppy
यो सामग्री पढ्नुभएर यहाँहरुलाई थोरै भएपनि STORAGE DEVICE सम्बन्धि जानकारी भयो कि भन्ने आशा गर्दछौ धन्यबाद।
Taggeddevicestoragewhat is storage device